Myanmar IT Dictionary: Button
ကွန်ပျုတာ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ခလုတ် တွေကို "အမိန့်ပေးခလုတ်" (Command button) သို့မဟုတ် "ဖိတွန်းခလုတ်" (Push button) လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်..၊ ဒီခလုတ်လေးတွေကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကြိုတင် စီစဉ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် …
စံအဖြစ် ထားရှိ အသုံးပြုတဲ့ ခလုတ် အများစုဟာ လေးထောင့်ပုံ သို့မဟုတ် "ထောင့်ဝန်းလေးထောင့်ပုံ" (Round-rectangle) အသွင် ရှိကြပါတယ်.. အမြင့်ထက် အလျားက ပိုကျယ်ပြီး အတွင်းမှာ အကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက် ပါရှိပါတယ်.. အခုလိုပေါ့.. (စမ်း နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ-->>)
Sample button ခလုတ်နမူနာ
ခလုတ် တစ်ခုကို ဖိနိုင်ဖို့ အတွက် အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မောက်စ်ကို အသုံးပြုပြီး ညွှန်တံနဲ့ ကလစ်လုပ်ခြင်း ပါပဲ.. အခြားသော နည်းလမ်းများ အနေနဲ့ ကီးဘုတ်က ခလုတ်များကို အသုံးပြုပြီး နှိပ်တာမျိုးကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်.. ခလုတ်တွေဟာ အမြဲတမ်း လေးထောင့်ပုံ ရှိနေရမယ် ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တော့ မရှိပါဘူး.. မောက်စ်ကို အသုံးပြုသူနေသူ တစ်ယောက်က ခလုတ်တစ်ခုကို ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီခလုတ်က လုပ်ပေးရမယ့် အလုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်.. အဲဒီအတွက်ကြောင့် ရုပ်ပုံများနဲ့ နောက်ခံနေရာများကိုလည်း ခလုတ်များအဖြစ် အလုပ်လုပ်အောင် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ် ထားနိုင်ပါတယ်.. အချို့သော ခလုတ်များကို ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အပြင်၊ ဖိလိုက်တဲ့ အတွက် နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ အသွင်မျိုး ဖြစ်လာအောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားလေ့ ရှိကြပါတယ်..
ခလုတ်အများစုမှာ ရှိကြတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချက်များကတော့ …
OK ခလုတ် - လုပ်ဆောင်ချက်များကို အတည်ပြုရန်
Cancel ခလုတ် - လုပ်ဆောင်ချက်များကို ငြင်းပယ်ရန် (ဥပမာ- ဖွင့်လိုက်သော ၀င်းဒိုး တစ်ခုကို ပြန်ပိတ်ခြင်း)
Exit ခလုတ် - ပရိုဂရမ် များကို ပိတ်ရန် - ထွက်ရန်
လုပ်ဆောင်စေလိုသော အလုပ်ကို ဖော်ပြထားခြင်း (ဥပမာ - "၀င်မည်" "Sign In" ခလုတ်)
တွေ ဖြစ်ပါတယ် …
ပန်းသီး (Apple Macintosh)
ပန်းသီး ကွန်ပျုတာများ ပါရှိတဲ့ ခလုတ်လေးတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ လုံးဝန်းတဲ့ သို့မဟုတ် ထောင့်များ လုံးဝန်းထားတဲ့ သလင်းကျောက်တုံးလေး များလို ပုံဖော်ထားတာ မြင်ရမှာပါ။ ခလုတ်လေးတွေ၊ အရုပ်လေးတွေဟာ သက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်အပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုမယ့်သူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားနိုင်အောင် မသိမသာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ဖန်တီးထားတာ မြင်ရမှာပါ။ ၊ ချွင်းချက် အနေနဲ့ - ၀င်းဒိုးတွေကို အဖွင့်/အပိတ် လုပ်ပေးမယ့် ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်က အနီ၊ အ၀ါ၊ အစိမ်း ခလုတ်သုံးခုမှ အပ - ကျန်ခလုတ် အများစုဟာ စိမ်းပြာရောင် အသွင်နဲ့ ရှိကြတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက္ကရိုဆော့ဖ် ၀င်းဒိုး (Microsoft Windows)
မိုက္ကရိုဆော့ဖ် ၀င်းဒိုးစနစ်မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ခလုတ်များဟာ အများအားဖြင့် လေးထောင့် (ထောင့်မှန် စတုဂံ) ပုံစံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ စနစ်များမှာတော့ "လုံးဝန်းတဲ့ ထောင့်များနဲ့ ခလုတ်" ပုံစံကိုလည်း သုံးနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတာ မြင်ရမှာပါ။ ၀င်းဒိုးစနစ်က လောလောဆယ် အဆင်သင့် စောင့်နေတဲ့ (Focus - ဖြစ်နေခြင်းကို ဆီလျော်အောင် ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါ၏) ခလုတ်ရဲ့ ဘောင်အတွင်းထဲမှာ အနက်ရောင် မျဉ်းစက်လေးများကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတာကို Focus ဖြစ်နေတယ် လို့ ပြောတာပါ။ အောက်က နမူနာ ပုံလေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (Focus အကြောင်း သီးခြား ဖော်ပြပါမည်..)
နောက်ပိုင်း စနစ်များမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ ခလုတ် (Default Button) တွေကို အပြာရောင် အနားသတ်မျဉ်းများနဲ့ ဖော်ပြထားလေ့ ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Windows Vista မှာတော့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ ခလုတ် (Default Button) ဟာ သူ့ရဲ့ ပုံမှန်မြင်နေရတဲ့ အနေအထားထက် အနည်းငယ် မှိန်သွားပြီး အပြာရောင် အနားသတ်မျဉ်း ပါရှိပါတယ်။
*. ကွန်ပျုတာ ပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ ခလုတ်တွေဟာ အပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် အသုံးပြုနေတဲ့ ခလုတ်တွေနဲ့ အခြေခံသဘောချင်း အတူတူ ဖြစ်ပါတယ် …
*. ကွန်ပျုတာ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ မရှိခင်ကတဲက ရှိနှင့်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့ သမားရိုးကျ ပုံမှန် ခလုတ်တွေ အကြောင်း လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုလို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
လေးထောင့် သို့မဟုတ် အ၀ိုင်းပုံ အများဆုံး ဖြစ်ခြင်း
လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အလုပ်ကို ရုပ်ပုံများ ရေးဆွဲ ဖော်ပြ ပေးထားခြင်း
ညီညာနေသော မျက်နှာပြင် ပေါ်တွင် သိသိသာသာ မြင့်တက်နေခြင်း
မြင်လိုက်သည်နှင့် ဖိနှိပ်နိုင်သည့် သဘော သိသာခြင်း
(အများစုမှာ) ဖိနှိပ်လိုက်ပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
(ဥပမာ - မီးခလုတ်နှိပ်၍ မီးလင်းခြင်း)
(အများစုမှာ) ဖိနှိပ်ထားသော ခလုတ်တစ်ခုကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်နှိပ်ပါက လုပ်နေသော အလုပ်ကို ရပ်ပေးခြင်း
(ဥပမာ - မီးဖွင့်ထားသည့် ခလုတ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်နှိပ်လျှင် မီးပိတ်သွားခြင်း)
*. သမားရိုးကျ ခလုတ်တစ်ခု ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ …
ပထမ တစ်ကြိမ် ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူလုပ်ဆောင်ရမယ့် အလုပ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးတာ ဖြစ်ပြီး
ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကို ရပ်တန့်ပေးတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
*. ကွန်ပျုတာ ပရိုဂရမ်များမှာ ပါတဲ့ အချို့သော ခလုတ်များမှာ ဒီသဘောကို မြင်နိုင်ပါတယ် …
ဥပမာ - ၀င်းဒိုး စနစ်မှာ ပါတဲ့ Start ခလုတ် -
ပထမ အကြိမ် နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ Start Menu ပေါ်လာပြီး
နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ Start Menu ပြန်ပျောက်သွားတာ မြင်ရမှာပါ..
Menu bar တွေမှာ ပါတဲ့ File, Edit, View,.. ,Tools, Help စတဲ့ နေရာများဟာလည်း အလားတူပါပဲ။
ပထမအကြိမ် နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ Menu ပေါ်လာပြီး
နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့ အခါ ပေါ်နေတဲ့ Menu ပြန်ပျောက်သွားတာ မြင်ရမှာပါ။
ခလုတ် အများစုဟာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ အခြားသော အရာများထက် …
အရောင် ကွဲပြားခြားနား နေခြင်း
မောက်စ် ဖြတ်သန်းလိုက်သည့် အခါ အရောင်ပြောင်းလာခြင်း/ ကြွတက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ထိုနှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်လာခြင်း
ဖိနှိပ် ခံလိုက်ရပြီးသည့် အခါတွင်လည်း ချိုင့်ဝင်နေသည့်/ နိမ့်ကျသွားသည့် အသွင်မျိုး မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင် အသစ် ပြောင်းသွားခြင်း
-define:Button inGoogle Search
-Books & Web Sites shown in Reference Section
ဆွေးနွေး အကြံပြုချက်များ အားလုံးနှင့်
ထပ်မံ ဖြည့်စွက်လိုသော အချက် အလက်များကို Comment မှတဆင့်
ထည့်သွင်း ဆွေးနွေး ပေးသွား နိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား...
Labels: Button, GUI
Hello, IT Friends,
I am not adding or making any comments at the moment. First of all I want to express my joy to seeablog on IT affairs run by Burmese People. I believe it will be of greatly beneficial for the youths who are eagre to learn IT. And I give you my word, asaBurmese, I will pass on the word about the existence of suchablog to every Burmese Youth I see. I amadoctor. My daily life involvesalot of reading. And I know that text can be read out by computer software, e.g. Adobe Reader among many others. Many of them are not always very convenient. When you want to go back toaparagraph oraline in the middle of the page, it will restart reading at the top of the page. The speed or pitch can not be adjusted to suit your convenience best. So if you have any idea aboutasoftware that can be used to read web pages, MS Word, PDF and text from CD ROMS and that also allows you creat your own text files and saved to be read out aloud anytime you wish please let me know. Your help and advice will be very much appreciated.
January 6, 2008 at 8:16 PM
Great Work !! Thanks for all things from your blog.
January 17, 2008 at 4:57 AM
April 5, 2008 at 12:06 AM